Buug-gacmeedka Waalidka-Ardayga ee MHS | Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka
Wadahadalka u dhexeeya shaqaalaha dugsiga iyo waalidiinta ayaa ah mudnaanta sare. Marka qoysaska iyo dugsiyadu si iskaashi u shaqeeyaan, fursadaha ardayda dhammaad ma leh. Waxaan diyaarinay dhowr wadiiqo oo xiriir xushmad leh oo xushmad leh, oo ay kujiraan guryo furan, habeenada iskuulka lagu laabto, shirarka waalidka iyo macalinka, fursadaha iskaa wax u qabso, golayaasha la talinta, boostada codka, e-maylka, websaydhada fasalka, marinka khadka tooska ah ee ardayda iyo inbadan. Waxaan si buuxda u heellan nahay inaan si joogto ah ula soo xiriirno wadashaqeyn dhow annaga oo taageerayna guusha ilmahaaga. Waxaan si kal iyo laab ah kuugu rajeynayaa adiga iyo qoyskaagaba inaad ku guuleysataan oo aad ku qanacdaan waayo aragnimo waxbarasho sannadkan oo ah Dugsiyada Minnetonka!